Diyaarad ku burburtay waqooyiga dalka Nepal – Radio Daljir
Kathmandu, May 14 – Diyaaradda oo ay lahayd shirkadda diyaaradaha ee Agni Air ayaa burburtay ,iyadoo isku dayeysay in ay caga dhigato madaarka Jomsom airport oo ku yaalla waqooyiga dalkaasi Nepal,sida ay sheegayaan saraakiisha wadankaasi Nepal.
Kooxaha badbaadada ee dalkaasi Nepal ayaa u gurmanaya meesha ay diyaaraddu ku burburtay , si loo raadiyo haddii ay jiraan dad ka samata-baxay shilka.
Dowladda dalkaasi Nepal ayaa sheegaysa in ay ku dadaalayso sidii baadhitaan buuxa loogu samaynlahaa shilkaasi burburka diyaaradda.
Shilalka dhinaca diyaaradaha ayaan ku badnayn dalkaasi buuraleyda ah ee Nepal ,laakiin sanadkii hore 19 qof ayaa ku dhintay burbur diyaaradeed oo ka dhacday buurta adduunka ugu dheer ee Everest oo ku taalla meel ka yara baxsan caasimada dalkaasi ee magaalada Kathmandu.
Diyaaradaasi ayaa sidday dalxiisayaal doonayey in ay soo arkaan buurta adduunka ufu dheer.